एउटै परेवाको मूल्य १५ करोड ५५ लाख !
एजेन्सी । काठमाडाैंका मठ-मन्दिरमा लाखाैं जोडी परेवा निस्फिक्री उडिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ गुँड नै बनाएर बसेका परेवाहरू बस्तीतर्फ पनि जाने गर्छन् । तर यी परेवालाई शान्तीको प्रतिक मान्ने बाहेक मानिसहरूले खासै महत्व दिँदैनन ।
बेल्जियममा परेवा कारोबारमा अचम्मको घटना घटेको छ । उडेको दुरीको आधारमा एउटै परेवालाई १.२५ मिलियन युरो अर्थात १५ करोड ५४ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम लिलाम बढाबढ गरि बेचिएको छ ।
'अर्मान्डो' नामको परेवालाई किन्न लिलामीघरमा भएको बढाबढमा यो किर्तीमानी रकम खन्याइएको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । अर्मान्डोलाई ‘लामो दूरीको सबैभन्दा उम्दा बेल्जियम परेवा’ र ‘लूइस हेमिल्टन’ उपमा समेत दिइएको छ ।
लिलामी घर पीपाले यसअघि पनि २ करोड ६६ लाख रूपैयाँमा परेवा बेचेको थियो । तर अर्मान्डोले पहिले बेचिएको परेवाको मूल्यको रेकर्ड तोडिदिएको हो । ५ बर्षे अर्मान्डोले अन्तिम तीन दौडमा जित हासिल गरेको थियो । यो परेवाले २०१८ को एस पिजन च्याम्पियन, २०१९ को पिजन ओलम्पिक र अंगूलेम जितेको छ ।
सुनको मूल्य स्थिर, कति छ आजको भाउ ?
काठमाडौं । बुधवार छापावाल सुनको भाउ तोलामा ६४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सुन आज हिजोकै मुल्यमा कारोबार भएको हो । यस्तै ताजावी सुन तोलामा ६४ हजार २०० मा कारोबार भए..
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ २४ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर १०९ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुप..
आज नेप्से ४ अंकले बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबार सेयर कारोबार मापन गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचकमा ४ अंकको सुधार आएको छ । आज नेप्से ४.४५ अंकले बढेर १ हजार २ सय ५९.०१ अंकमा पुगेको हो । नेप्से बढेको..
काठमाडौँ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले प्रतितोला फाइन गुणस्तरको सुन ६४ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै तेजावी सुन पनि तोलामा ६४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।..